Yan Aung: မိမိတို့ ချွေးနှဲစာဖြင့် ကထိန် ပဒေသာပင်သီးနိုင်ပါပြီ...
အစ်မက မပြည့်စုံဘူး။း)
မနေ့က နေမကောင်းပဲ အမြန်ရေးတင်လိုက်တာ.
သင်္ကန်း ၃ စုံတော့ အလှူငွေ ရထားပါပြီ။
တစ်ခုက သင်္ကန်းပရိက္ခရာတစ်စုံလုံးအတွက် အလှူငွေ
ဘယ်လို သတ်မှတ်ပေးရင်ကောင်းမလဲ မေးလ်ပို့လာပါ
အစ်မကတော့ စင်္ကာပူက အလှူရှင်တစ်ယောက်က သင်္ကန်းပရိက္ခရာတစ်စုံလုံးလှူချင်လို့ စလုံး ၁၀၀ ထည့်
မြန်မာငွေ ( ၇၈၀၀၀ ကျပ်ခန့်ပေါ့)
အဲလောက်ဆို အဆင်ပြေနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.
ပါတယ်။ မောင်ရန်အောင် တွက်ပေးလာပါဦး။
ဂျပန်ယန်းငွေကတော့ ၆၈၀၀ ယန်းလောက်ခန့်မှန်းထား
တာပဲ။ ယူအက်စ်က မောင်ရန်အောင်တွက်ပြီး ပြောပေး
စာတချို့ကော်ပီယူသွားတယ်နော်. ထပ်ဖြည့်မလို့။း)
သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပါပဲ ၀ိုင်းလည်း လှူချင်ပါတယ် ကိုရွာသားလေးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး လှူလိုက်ပါ့မယ် အခုလို အလှူအတွက် တိုက်တွန်းပေးတာ အထူးပင် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း...